तपाईको लक्षणहरूको आधारमा उत्तम चिसो औषधि फेला पार्नुहोस् एकलकेयर - औषधि जानकारी | सेप्टेम्बर 2021
समाचार, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, औषधि जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार प्रेस स्वास्थ्य स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण घरपालुवा जनावर कम्पनी भारी खेल औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा चेकआउट कल्याण औषधि जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर
मुख्य >> औषधि जानकारी >> तपाईको लक्षणहरूको आधारमा उत्तम चिसो औषधि फेला पार्नुहोस्
तपाईको लक्षणहरूको आधारमा उत्तम चिसो औषधि फेला पार्नुहोस्
सामान्य चिसो एक भाइरल संक्रमण हो जसले नाक र घाँटीलाई असर गर्दछ। खराब समाचार यो हो कि चिसो लाग्न केही समय लाग्छ, तर शुभ समाचार यो हो कि उपचारलाई फार्मेसीमा द्रुत यात्राको आवश्यक पर्दछ। चिसो औषधी जस्ता डिकन्जेन्ट्स र खोकी सप्रेसन्ट्सले लक्षणहरू कम गर्न मद्दत गर्दछ जस्तै भरिपूर्ण नाक वा घाँटी दुखाइ। केहि राम्रा चिसो औषधिहरूमा एक नजर राख्दछौं ताकि तपाईं वा तपाईंको परिवारको कुनै सदस्य चिसो भयो भने के खोज्ने भनेर तपाईंलाई थाहा हुन्छ।
चिसो औषधि को प्रकारहरु
चिसो औषधीहरूको तलको सूचीले चिसोका लक्षणहरू जस्तै बहेको नाक, भीड, छींकने, घाँटी दुखाइ, वा खोकी उपचार गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। यी कुनै पनि औषधीले चिसो निको पार्न सक्दैन; तिनीहरू केवल लक्षणात्मक राहत प्रदान गर्दछ।
एन्टीहिस्टामाइन्सले प्राथमिक रूपमा एलर्जीको उपचार गर्दछ। एलर्जी र चिसोका लक्षणहरूको बिचमा केही परस्परोपचार भएकोले, एन्टीहिस्टामाइन्सले छिच्छो, बग्ने नाक, र चिलाउने र पानी आँखाको पनि उपचार गर्न सक्छ जुन चिसो हुनेबाट आउँदछ। पहिलो पुस्ताको एन्टिहिस्टामाइन्स मा प्राथमिक छन् दोस्रो पुस्ताको एन्टिहिस्टामाइन्स किनकि ती छींकने र बहेको नाक जस्ता लक्षणहरूको उपचार गर्न राम्रो हुन्छन्। ओभर-द-काउन्टर (ओटीसी) एन्टीहिस्टामाइन्स जसले चिसो लक्षणहरूको उपचार गर्न मद्दत गर्न सक्छ:
डिमेटेन (ब्रोम्फेनिरामाइन म्यालेट)
Chlor-Trimeton (chlorpheniramine Menate)
टाविस्ट (क्लेमास्टिन फ्युमरेट)
अन्य एन्टीहिस्टामाइन्सहरू जस्तै एस्टेलिन (अजेलास्टिन) नाक स्प्रे वा एमाडाइन (एमेडास्टाइन) आँखा ड्रपलाई डाक्टरको प्रिस्क्रिप्सन चाहिन्छ।
सम्बन्धित: गैर-सुस्त बेनाड्रिल: मेरो विकल्पहरू के-के हुन्?
खोकीसँग जुकामको लागि उत्तम औषधी मध्ये एक हो खोकी दबाउने । धेरै मानिसहरू आफ्नो खोक्राको कारण निद्रामा कठिनाई भएको बेला खोकी सप्रेसन्टहरू रातमा लिनको लागि उपयोगी हुन्छन्। खोकी सप्रेसन्ट्स (जसलाई एन्टिट्युसिभ पनि भनिन्छ) खान्कीको चाहनालाई दबाएर काम गर्दछ। सामान्य चिसोका लागि सबैभन्दा सामान्य ओटीसी खांसी दबाउने काम डेक्स्ट्रोमर्थोर्फन हो, जस्तो कि विक्स डेक्विल कफ वा रोबाफेन खाँसीमा पाइन्छ।
अधिक गम्भीर खोकी जुन केही हप्ताहरू भन्दा लामो हुन्छ, एक डाक्टरले खोकीको औषधि जस्तो सल्लाह दिन सक्छ कोडिन वा हाइड्रोकोडोन-एसिटामिनोफेन । खाद्य र औषधि प्रशासन ( एफडीए ) २ बर्ष भन्दा कम उमेरका बच्चाहरूको लागि ओभर-द-काउन्टर खोकी औषधि सिफारिस गर्दैन, र हाइड्रोकोडोन वा कोडिन युक्त प्रिस्क्रिप्शन कफ औषधिहरू १ children बर्ष भन्दा मुनिका बच्चाहरू वा किशोरकिशोरीहरूमा संकेतका लागि संकेत गरिएको छैन।
एक्सपेक्टोरन्ट्सले बलगम पातलो बनाउन सहयोग गर्दछ, जसले बलगम खोक्रा गर्न र छातीको भीडलाई कम गर्न सजिलो बनाउँदछ। त्यहाँ धेरै ओटीसी एक्सपेक्टोरन्ट उत्पादनहरू उपलब्ध छन्, जसले यसको सक्रिय घटकको रूपमा ग्वाइफेनिसिन समावेश गर्दछ।
म्यूसिनेक्स ईआर (विस्तारित-रिलीज ग्वाइफेनिसिन)
एक्सपेक्टोरन्ट्स र एन्टिट्युसेभ्स धेरै ओटीसी संयोजन उत्पादनहरूमा सँगै फेला पार्न सकिन्छ, जस्तै रोबिटुसिन डीएम (ग्वाइफेनेसिन र डेक्स्ट्रोमर्थोर्मन)।
सम्बन्धित: राति खोकी कसरी रोक्न सकिन्छ
यी मौखिक रूपमा वा नाक स्प्रे मार्फत लिन सकिन्छ। डिकोन्जेन्ट्स भनेको औषधी हो जसले नाकमा सुन्निएको झिल्लीलाई संकुचित गर्दछ, सास फेर्न सहज बनाउँदछ, भन्छ मोर्टन तावेल , MD, को लेखक साँप तेल जीवित छ र राम्रो छ । उच्च रक्तचापका बिरामीहरूले सावधानीका साथ डिकन्जेन्ट्स प्रयोग गर्नु पर्छ। [यो] एक डाक्टरको सुपरिवेक्षणमा सबै भन्दा राम्रो उपलब्धि छ। नाक स्प्रे डिकन्जेस्टन्ट, अक्सीमेटोजोलिन (अफ्रिन), थोरै रूपमा प्रयोग गर्नुपर्दछ र १ देखि २ दिन भन्दा बढीको लागि यसको साइड इफेक्टको कारणले नाकाको भीडलाई पल्टाउनुहोस् ।
यहाँ केहि धेरै सामान्य ओटीसी डिकोन्जेन्ट्स छन्।
म्यूकेनेक्स डी (स्यूडोफेड्रिन-ग्वाइफेनिसिन)
कहिले काहिं, चिसोले शरीरमा दुखाइ, टाउको दुख्ने, र दुर्लभ अवस्थामा फेर्नेजस्ता असहज लक्षणहरू निम्त्याउन सक्छ। जे होस्, यदि तपाईंले यी लक्षणहरू अनुभव गर्नुभयो भने, तपाईंलाई वास्तवमै फ्लू हुन सक्छ । पीडा निवारकहरूले पीडादायी लक्षणहरूलाई कम गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ जुन अन्य चिसो औषधिहरूले गर्न सक्दैन। Nonsteroidal विरोधी भड़काऊ ड्रग्स (NSAIDs) जस्तै आईबुप्रोफेन वा नेप्रोक्सेन, र अन्य पीडा कम गर्ने acetaminophen, पीडा राहत र ओभर कम गर्न मद्दत को लागी over-the-काउन्टर किन्न सकिन्छ।
केही संयोजन चिसो औषधिहरू पहिले नै एसिटामिनोफेन वा आईबुप्रोफेन समावेश गर्दछ, त्यसैले चिसो औषधीको साथ दुखाइ हटाउनु अघि लेबलको दुई पटक जाँच गर्नु राम्रो विचार हो। इबुप्रोफेन र एस्पिरिन गर्नु हुँदैन एक चिकित्सक द्वारा निर्देशित नगरेसम्म be महिना भन्दा कम बच्चाहरु लाई दिइनेछ।
सम्बन्धित: बच्चाहरूका लागि सबैभन्दा उत्तम पीडा रिलीभर वा ज्वरो शमनकर्ता के हो?
यदि तपाइँ कुन प्रकारको चिसो औषधि चाहानुहुन्छ भन्ने बारे निश्चित हुनुहुन्न भने, तपाइँको डाक्टरसँग कुरा गर्नु उत्तम हुन्छ। धेरै जसो अवस्थाहरूमा, डाक्टरले अत्यधिक काउन्टर चिसो औषधि सिफारिस गर्दछन्, र विरलै अवस्थाहरूमा उनीहरूले सिफारिस गरिएको कडा औषधि सिफारिस गर्न सक्छन्। धेरै मानिसहरूले एन्टिबायोटिकको लागि आफ्नो डाक्टरलाई सोध्छन्, तर चिसो भाइरल छ र एन्टिबायोटिकलाई प्रतिक्रिया दिदैन।
प्रयोग गर्नका लागि सबैभन्दा उत्तम चिसो औषधी के हो?
राम्रो चिसो प्रयोग गर्न को लागी कसैको लक्षणहरु को आधार मा फरक पर्दछ। उदाहरण को लागी, चिसो र खोकीले कसैलाई खोकी दबाउने औषधी लिन आवश्यक पर्दछ, चिसो र चिसो नाक भएको कसैले डिकन्जेस्टन्ट लिन आवश्यक पर्न सक्छ। तपाईं एक भरिएको नाक छैन जब एक डिकन्जेन्टेन्ट लिन शायद तपाईं मद्दत गर्न गइरहेको छैन यदि तपाईं घाँटी दुखाइबाट राहत खोज्दै हुनुहुन्छ भने।
उत्तम चिसो औषधि पत्ता लगाउनुमा कुन चिसो लक्षणमा तपाई सबैभन्दा बढी राहत चाहानुहुन्छ - त्यो औषधि फेला पार्नुहोस् जुन ती लक्षणहरूको उपचार गर्दछ। केहि उपचारले बहु-लक्षण राहत प्रदान गर्दछ र लेबलमा त्यसो भन्दछ।
यदि तपाइँ अझै पनी कुन चिसो औषधि छनौट गर्ने बारे अनिश्चित हुनुहुन्छ भने, तपाइँ जहिले पनि तपाइँको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सहित तपाइँको फार्मासिष्टलाई सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ। चिसो औषधि सेवनले तपाईंको प्रिस्क्रिप्शन औषधीमा हस्तक्षेप गर्दछ यदि तपाइँको डाक्टर वा फार्मासिष्टलाई सोध्नु यो पनि एक राम्रो विचार हो, किनकि औषधि औषधी व्यवहारले अनावश्यक साइड इफेक्ट निम्त्याउन सक्छ।
उत्तम चिसो औषधि
औषधिको प्रकार यसले के व्यवहार गर्दछ एकलकेयर बचत
डिमेटेन (ब्रोम्फेनिरामाइन म्यालेट) एन्टीहिस्टामाइन छींक, बहेको नाक, खुजली र पानी आँखाहरू हटाउँछ कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
Chlor-Trimeton (chlorpheniramine Menate) एन्टीहिस्टामाइन छींक, बहेको नाक, खुजली र पानी आँखाहरू हटाउँछ कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
टाविस्ट (क्लेमास्टिन फ्युमरेट) एन्टीहिस्टामाइन छींक, बहेको नाक, खुजली र पानी आँखाहरू हटाउँछ कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
विक्स डेक्विल कफ (dextromethorphan) खोकी दमन खोकीको आग्रहलाई कम गर्दछ कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
रोबाफेन कफ (डेक्स्ट्रोमर्थोर्फन) खोकी दमन खोकीको आग्रहलाई कम गर्दछ कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
Sudafed (स्यूडोफेड्रिन) डिकन्जेन्ट भीडभाड र भरिएको नाकबाट छुटकारा दिन्छ; सास फेर्न सजिलो बनाउँदछ कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
अफ्रिन (अक्सीमेटोजोलिन) डिकन्जेन्ट भीडभाड र भरिएको नाकबाट छुटकारा दिन्छ; सास फेर्न सजिलो बनाउँदछ कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
म्यूकेनेक्स डी (स्यूडोफेड्रिन- ग्वाइफेनिसिन) डिकन्जेन्टेन्ट - कम्फर्टेन्ट भीडभाड र भरिएको नाकबाट छुटकारा दिन्छ; छातीको भीडलाई कम गर्दछ कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
म्यूसिनेक्स (ग्वाइफेनिसिन) कफेटोरन्ट छातीको भीडलाई कम गर्दछ; यो बलगम कफ गर्न सजिलो बनाउँछ कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
रोबाफेन (ग्वाइफेनिसिन) कफेटोरन्ट छातीको भीडलाई कम गर्दछ; यो बलगम कफ गर्न सजिलो बनाउँछ कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
एडभिल (आइबुप्रोफेन) दुखाइ राहत शरीर दुखाइ, टाउको दुख्ने, र fevers व्यवहार गर्दछ कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
टायलनॉल (एसिटामिनोफेन) दुखाइ राहत शरीर दुखाइ, टाउको दुख्ने, र fevers व्यवहार गर्दछ कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
एलेभ (नेप्रोक्सेन) दुखाइ राहत शरीर दुखाइ, टाउको दुख्ने, र fevers व्यवहार गर्दछ कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
जिंक पूरक चिसोको अवधि कम गर्दछ कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
Echinacea पूरक चिसो को अवधि को कम गर्दछ र साधारण चिसो करार को रोक्न सक्छ कुपन प्राप्त गर्नुहोस्
तपाईं कसरी चिसो छिटोबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ?
चिसो छिटोबाट छुटकारा पाउन मद्दत गर्ने धेरै तरिकाहरू छन्। औसत चिसो रहन्छ जहाँसुकै पनि धेरै दिन देखि धेरै हप्ता सम्म। जहाँसम्म तपाईं २ 24 घण्टामा चिसो हराउनुहुन्न, उचित औषधि र घरेलु उपचारहरूको साथ, तपाईं लक्षण लक्षण तुरुन्त प्राप्त गर्न सक्षम हुनुपर्दछ, र केही दिनमै पुनः ठीक हुन सक्नुहुन्छ। यहाँ केही उत्तम चिसो उपचारहरू छन्:
प्रशस्त आराम पाउनुहोस्: चिसोको साथ बिरामी हुँदा राम्ररी विश्राम गरिरहँदा तपाईंको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई विश्राम दिएर तपाईंको शरीरलाई चाँडो निको पार्न मद्दत गर्दछ। ओभरटाइम काम गर्ने, व्यस्त रहन, र चिसो संग व्यायाम गर्नाले तपाइँको प्रतिरक्षा प्रणालीमा अनावश्यक तनाव राख्न सक्छ।
हाइड्रेटेड रहनुहोस्: चिसो भएको बेला पानी पिउँदा तपाईंको नाक र घाँटी ओसिलो रहन मद्दत गर्दछ, यसले तपाईंलाई कफ कति कम गर्दछ र भीमको कारणले बलगम खुकुलो पार्छ।
एक ह्युमिडिफायर प्रयोग गर्नुहोस्: रातमा तपाईंको कोठामा एक ह्युमिडिफायर चलाउनाले नाकको भीडलाई कम गर्न र नाक र घाँटी शान्त गर्न मद्दत गर्दछ। यो विशेष गरी रातको खोकीलाई कम गर्नका लागि उपयोगी छ।
अति-काउन्टर औषधिहरू प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्: एक ओभर-द-काउन्टर औषधि प्रयोग गर्दा जस्तै माथि सूचीबद्ध ती विशिष्ट लक्षणहरूको उपचार गर्न मद्दत गर्दछ जुन तपाईंलाई चिसोबाट पीडित हुन सक्छ।
जिंक र echinacea को साथ पूरक: लिदै जिंक चिसोको पहिलो लक्षणहरूमा लक्षणहरूको अवधि छोटो बनाउन मद्दत गर्दछ। जस्ता मात्र प्रतिरक्षा समारोह समर्थन गर्दछ, तर यो पनि एक antiviral प्रभाव छ। इचिनासियाले साधारण चिसोको अवधि लगभग डेढ दिन घटाउन सक्छ, र यसले चिसो हुने सम्भावनालाई पनि कम गर्न सक्छ। आधा । जिंक जस्ता, एकिनासिआ रोगको पहिलो लक्षणमा राम्रोसँग लिन्छन् र स्वास्थ्य खाद्य स्टोरहरू र केही किराना स्टोरहरूबाट खरीद गर्न सकिन्छ।
खानका लागि स्वस्थ खानाहरू छनौट गर्नुहोस्: बिरामी भएको बेला केहि खानेकुरा खानुहुन्छ तपाइँको प्रतिरक्षा प्रणाली कम गर्न सक्नुहुन्छ। परिष्कृत चिनी, क्याफिन, मदिरा, र प्रशोधित खाद्य पदार्थ तपाईंको शरीरलाई चिसोसँग राम्रोसँग लड्नबाट जोगाउन सक्छ। भिटामिन सी र तरकारीसहित ताजा फलफूलहरूले तपाईंलाई छिटो निको पार्न मद्दत गर्दछ।
तपाईंको चिसोको उपचार गरिरहँदा घरमै बस्नु सधैं राम्रो विचार हो यदि तपाईं यसो गर्न सक्षम हुनुभयो भने। रोग नियन्त्रण र रोकथामका लागि केन्द्रहरू ( CDC ) सिफारिश गर्दछ यदि तपाइँसँग चिसो छ भने अरूलाई यो प्रसार गर्नबाट रोक्न मद्दत गर्नुहोस्। चिसो भएको खण्डमा बच्चाहरूलाई स्कूल वा डेकेयरबाट बाहिर राख्नु पनि एक राम्रो विचार हो जसले अरूलाई बिरामी हुनबाट बचाउँदछ।
चिसो लक्षणहरूको लागि जब डाक्टरलाई भेट्ने
यद्यपि प्रायजसो जाडो एक सानो सेल्फ-केयरको साथ आफैंमा गइहाल्दछ, केही चिसो बढी गम्भिर हुन र आवश्यक हुन सक्छ चिकित्सा ध्यान । यदि तपाइँसँग चिसो लागेको छ र तलका कुनै लक्षणहरू छन् भने, तपाईले आफ्नो डाक्टरलाई भेट्ने समय मिलाउन बोलाउनु पर्छ:
ज्वरो पाँच दिन भन्दा लामो समय सम्म रहन्छ
गम्भीर साइनस दुखाइ
यी लक्षणहरू अधिक गम्भीर चिकित्सा अवस्था जस्तो लक्षण हुन सक्छ निमोनिया वा दम । तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले एक शारीरिक परीक्षण गर्नेछ र तपाईंको लक्षणहरूको कारण के हुन सक्छ भन्ने निर्धारण गर्न तपाईंको मेडिकल ईतिहासको बारेमा सोध्नेछ। तपाईको परिक्षण पछि, ऊ वा उनी तपाईको लागि उत्तम उपचार विकल्प निर्धारण गर्न सक्षम हुनेछ।
स्तनपानबाट थ्रशलाई कसरी चिन्ने र उपचार गर्ने
तपाइँको लागी योजना बी कती खराब छ
कटौती योग्य र पकेट बाहिर के फरक छ?
योजनाbगोली काम गर्न सक्दैन
तपाइँ राती किन बढी रुघाखोकी गर्नुहुन्छ?
तपाइँ कसरी घर मा खमीर संक्रमण को उपचार गर्न सक्नुहुन्छ